May 2022 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa AxadTaariiiikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Barta whatsapka idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariiiikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 28-10-1443 oo…
Madaxda FBI-da Mareykanka ayaa shaaciyay in Bush uu ka bad baaday weerar isku day dil ah, kaas oo uu qorsheynayay nin kasoo jeeda dalka Ciraaq. Ruuxaan ayay FBI-du sheegtay inuu xiriir lasoo sameeyay madax katirsan federalka Mareykanka,…
Ciidamo ka tirsan kuwa DF ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhac iyo boob ka geystay degaanka Warciise oo hoos taga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe. Wararka naga soo gaaraya War-ciise ayaa sheegaya in askarta oo qamaam ah ay soo…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti Taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Socdaal	 May 28, 2022 0
Dhageystayaasha iyo akhrisstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Halkaan Ka Dhageyso Barnaamijka_Tarbiyada_Caruurta
Socdaal	 May 27, 2022 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Jimco,Taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Maanta waa jimco Taariikhda Hijriguna waxay ku beegantahay 26-10-1443 oo waafaqsan 27-05-2022 qeybta Hoose ka dhagayso Barnaamijka todobaadlaha ah ee Diirada Jimcaha oo maanta looga hadlay Caqabadaha Horyaalla Madaxweyne Xasan Sheekh.waxaa…